Dowladda Itoobiya oo xirtay Sedax kamid ah Guddoomiyaasha degmooyinka gobolka Gedo.
Saturday November 09, 2019 - 11:52:41 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Ciidamo Itoobiya ayaa xabsiga dhigay mas'uuliyiin katirsanaa maamulka isku magacaabay Jubbaland ee ka jira deegaanno katirsan gobollada Gedo iyo Jubbada Hoose.
Wararka ka imaanaya degmada Dooloow ee xuduud beenaadka dhacda ayaa sheegaya in ciidamo Itoobiyaan ah ay xireen guddoomiyaasha illaa sedax degmo oo dhammaantood ay ka jiraan maamullo Axmed Madoobe taabacsan.
ilo wareedyo ayaa sheegaya in dhanka magaalada Addis Ababa loo gudbiyay guddoomiyaasha degmooyinka Dooloow,Beled xaawo iyo Luuq, amarka lagu xiray sedaxdaan guddoomiye waxaa bixiyay Farmaajo oo ah hoggaamiyaha dowladda Federaalka.
Xildhibaanad katirsan baarlamaanka DF oo kasoo jeeda gobolka Gedo ayaa ku eedaysay Farmaajo in uu Itoobiya ku dalbaday xarigga sedaxda guddoomiye degmo islamarkaana aan la ogeyn xaaladda ay ku suganyihiin mas'uuliyiinta xiran.
Khilaafka siyaasadeed ee ka dhaxeeya maamulka Axmed Madoobe iyo DF-ka ayaa gaaray meeshii ugu sarraysay, maalin ka hor ayay aheyd markii ciidamo katirsanaa 'Jubbaland' ay ugoosteen dhanka degmada Luuq ayna ku biireen dowladda Federaalka.
Weerar Cag marin ah oo ka dhacay deegaanka Daynuunaay ee gobolka Bay.
Roobabka Guga oo ka curtay qaar kamid ah gobollada Soomaaliya.